यस कम्पनीको सञ्चालक समितिको मिति २०७२/११/११ गते बसेको सञ्चालक समितिको १३५ औं बैठकको निर्णयानुसार मिति २०७२ साल चैत ५ गते शुक्रबार (तदनुसार मार्च १८, २०१६), बिहान’ ११:०० बजे, कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय, शिखर बिज सेण्टर, थापाथली, काठमाण्डौंमा विभिन्न प्रस्ताव उपर छलफल गरी निर्णय गर्न कम्पनीको दशौं वार्षिक साधारण सभा बस्ने भएकोले सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूलाई उपस्थितिको लागि […]
शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको साधारण शेयरको प्रमाण-पत्र मिति २०७२ माघ ७ गते बिहीबार देखि वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएकोले आफूले आवेदन बुझाएको संकलन केन्द्रमा सम्पर्क राखि प्रमाण-पत्र संकलन गर्नुहुन सूचित गर्दछौं। बिस्तृत जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला..
अतिरिक्त निष्काशन (एफपीओ) शेयर बाँडफाँड सूची
शिखर इन्स्योरेन्स (SICL) ले गरेको अतिरिक्त निष्काशन (एफपीओ ) को शनिबार बाँडफाँड भएको छ । बिस्तृत विवरण हेर्न तलको लिंक मा क्लिक गर्नुहोला।
फर्दर पब्लिक इस्यू बिक्री खुल्ला बारेको सूचना
शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको प्रति साधारण शेयर रु. १००/- मा प्रिमियम बापत रु. ५५०/- थप गरी प्रति शेयर रु. ६५०/- अंकित दरका ५,१०,९८८ कित्ता साधारण शेयरहरु आज मिति २०७२ मंसिर १७ गतेदेखि सर्बसाधारणहरुमा निष्काशन तथा बिक्री खुल्ला गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सूचित गरिन्छ। बिस्तृत जानकारीको लागि यहा क्लिक गर्नुहोला
नयाँ निष्कासन (फर्दर पब्लिक इस्यु) सम्बन्धी विवरण-पत्र हेर्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला